သံ်ထုတ်ကုန်များ - သံသောအစားအစာများကြွယ်ဝသော?
သံ - လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘဝတွေအတွက်မရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးအာဟာရပြည့်တစ်ခုမှာ။ ယင်း၏အက်တမ် tugs ကဲ့သို့သွေးကြောများ၏သက်တမ်းထပ်တိုး, ဖမ်း, လူ့များ၏တစ်ရှူးများနှင့်အင်္ဂါမှအဆုတ်ကနေသူ့ရဲ့အောက်စီဂျင်ကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်နောက်ကျောကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆွဲ။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ "ကျချိန်" နှင့် "ဗလာ" သဘာဝပေးမထားပါ။
Heme နှင့် Non-heme သံ
ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှောင့်အယှက်မှဦးဆောင်သည့်သံနှင့်အောက်စီဂျင်မရှိခြင်း၏မရှိခြင်းအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအား, အိပ်မပျော်, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြောက်သွေ့အသားအရေနှင့်ချွဲအမြှေးပါးလျော့နည်းသွား, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များအားနည်း - ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို hypoxia ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျထိုအလက္ခဏာတွေရှိပါကသင်သည်လက်သည်းမျိုသို့မဟုတ်သံချေးတက်ရေကိုသောက်ရန်မကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ လူ့ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသံအော်ဂဲနစ်: အသှေးကိုထူဖြစ်လာ, သွေးကြောပိတ်နဲ့ပိတျဆို့နတေဲ့ကြောင့်အမျိုးမျိုးသောကျောက်ဖွဲ့စည်းရေးမြှင့်လုပ်ဆောင်။
တစ်ဦးကလူတစ်ဦးသာအော်ဂဲနစ်တွေဟာအစာကြေနိုင်ပါ။ "သံ" ၏တစ်ဦးကလုံလောက်သောငွေပမာဏကိုကသံ (- 15 mg ကို 10 တို့အတွက်နေ့စဉ်မှုနှုန်း) ပါဝင်သောအစားအစာများကိုစားခြင်းအားဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ poduchaet ။ အော်ဂဲနစ်သံ2အမျိုးအစားများဖြစ်ပါသည်:
Heme သံတိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများမှာတွေ့ရှိ, ထိုသို့ဒါအလွယ်တကူလူ့ကစုပ်ယူ, တိရစ္ဆာန်ဟေမိုဂလိုဘင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါ 'ဟုဆိုအပ်၏။
non-heme သံအပင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကအများကြီးပိုဆိုးမြင်ကြ။ အားလုံးအဝင်အစားအစာ, သတ္တုသာဆယ်ဘို့တဘို့ဟေမိုဂလိုဘင်သို့ရရှိသွားတဲ့။ မြင့်မားသောသံအကြောင်းအရာနှင့်စက်ရုံထုတ်ကုန်, ဗီတာမင် C သို့မဟုတ် B က 12 ပါဝင်တဲ့သည်အခြားအစားအသောက်ထုတ်ကုန်တွေနှင့်အတူပေါင်းစပ်ခံရဖို့အကြံပြုခဲ့သည်။
ဒါကြောင့် "သံ" ကနျြးမာပျော်မွေ့ရန်, သင်မှန်ကိုစားရန်လိုအပ်သည်။ ပရိုတိန်း, Fats, ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, ဗီတာမင်, ထုတ်ကုန်များတွင် element တွေကိုခြေရာကောက်မျှမျှတတပါဝါကဖြစ်နိုင်သမျှပါစေ။ အမဲသားကိုနှင့်သတ္တဝါကသိမ်းပိုက်အနေအထားကိုဦးဆောင် (100 ဂရမ်ထုတ်ကုန်နှုန်း) ကိုသံအကြောင်းအရာအဖြစ်:
အသည်း (ဝက် 20 မီလီဂရမ်, 17 မီလီဂရမ်ကြက်သား, အမဲသား7မီလီဂရမ်);
နှလုံး (5 မီလီဂရမ်အမဲသား, ဝက်သား4မီလီဂရမ်);
အသား (ယုန် 4.5 မီလီဂရမ်, အမဲသား, သိုးသငယ်နှင့်နွားငယ်သား3မီလီဂရမ်၏ 3.5 မီလီဂရမ်, ဝက်သား, ကြက်သားနှင့်ကြက်ဆင် 1.5 မီလီဂရမ်၏ 1.8 မီလီဂရမ်) ။
အသက် 30 မီလီဂရမ်နှင့် ပတ်သက်. ဂဏန်းကွက်;
mussels7မီလီဂရမ်;
ကမာ6မီလီဂရမ်;
ပင်လယ် 2.5 မီလီဂရမ်ပုံမှန်အတိုင်း;
တူနာငါး2မီလီဂရမ်;
mackerel ပိုက်နှင့် 1.7 မီလီဂရမ်မှာ;
မြစ်ပုံမှန်အတိုင်း - 1.2 မီလီဂရမ်
sprat mackerel နှင့် 4.5 မီလီဂရမ်နှင့်အတူထိန်းသိမ်းထား;
စည်သွတ် mackerel3မီလီဂရမ်;
caviar 2.5 မီလီဂရမ်။
ကြက်သား4မီလီဂရမ်;
ငုံး2မီလီဂရမ်။
စီရီရယ် (buckwheat7မီလီဂရမ်,6မီလီဂရမ် oatmeal, ကောက်4မီလီဂရမ်,3မီလီဂရမ်ပြောင်းဖူး);
ပဲပင် (ပဲမျိုးစုံနှင့်ပဲဟင်း7မီလီဂရမ်, 1.5 မီလီဂရမ်ပဲစေ့တွေဟာရန်);
သီး (4 မီလီဂရမ် dogwood, ချယ်ရီနှင့် Raspberry 1.5 မီလီဂရမ်, 1 မီလီဂရမ်စတော်ဘယ်ရီ);
မျိုးစပါး (8 မီလီဂရမ်ရွှေဖရုံသီး, နေကြာ5မီလီဂရမ်) ။
ခြောက်သွေ့တဲ့ပန်းသီးနဲ့သစ်တော်သီး 5-6 မီလီဂရမ်;
apricots, 3.2 မီလီဂရမ်;
တံစဉ်များကို3မီလီဂရမ်။
အသား-စားနဲ့သက်သတ်လွတ်စား၏ထာဝရစကားစစ်ထိုးပွဲအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရတဲ့မပါဘဲကအသားတစ်ဦးအလွန်အသုံးဝင်သောထုတ်ကုန်ကြောင်းကိုမှတ်သားရပါမည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာမွတ်မပြေ၏အရသာကိုနှင့်ခံစားမှုအပြင်ကလူ့ခန္ဓာကိုယ်သံအပါအဝင်အသုံးဝင်သောတ္ထုများနှင့်ဗီတာမင်, တစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖြန့်ဖြူး။ ကျမတို့ကလည်းဘယ်ဟင်းကိုရည်ညွှန်းယေဘုယျအားအမဲသားကိုစားသောက်သောအစားအစာအကြောင်းပြောဆိုပါလျှင်, တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများအနေဖြင့်လုပ်ပါကအရာ၏ 100 ဂရမ်နေ့စဉ်စံ၏ 150% အထိပါဝင်ပါတယ်, အရှိဆုံးသံပါဝင်သောဝက်သားအသည်းအမည်ကိုမှသင့်လျော်သည်။
အဆိုပါစေ့စပ်ချက်ပြုတ်အမှတ်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အသည်းကထုတ်ကုန် (နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်က) မှစွပ်စွဲလျှင်, သံပါဝင်သောအမှန်တကယ်အသားထုတ်ကုန်တိရစ္ဆာန်၏ striated ကြွက်သားကနေကိုပြင်ဆင်နေကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အော်ဂဲနစ်သံပစ္စုပ္ပန်၏အကြီးမြတ်ဆုံးပမာဏကို ယုန်အသား (နေ့စဉ်လိုအပ်ချက် 30% ပါဝင်တဲ့ 100 ဂရမ်, လိုအပ်သောလူကို) ။ နွားငယ်သားများ၏သံအကြောင်းအရာထက်အနည်းငယ်လျော့နည်းပေမယ့်လုံးဝနီးပါးကြေညက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်နွားငယ်သားများနှင့်ယုန်အတွက်အများဆုံးအသုံးဝင်အစားအသောက်အသား (- ပရိုတိန်းဆီနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးရွှဲ) ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။
သင့်လျော်သောအစာအာဟာရငါးထုတ်ကုန်များ၏အစားအသောက်များတွင်အတွက်ထည့်သွင်းရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ကျနော်တို့အော်ဂဲနစ်သတ္တုများအကြောင်းပြောဆိုလျှင်, အရှိဆုံး "သံ" ငါး - grouper, တူနာငါး, mackerel နှင့်ပိုက်။ ကျန်ရှိနေသေးသောနေရာချထားမြစ်နှင့်ပင်လယ်နက်နဲသောပင်လယ် :. Pollock, etc ဆော်လမွန်ငါး, capelin, saury, herring, mackerel, ငါးကြင်း, seabream, ပုံမှန်အတိုင်း - သိသိသာသာယုတ်ညံ့ခေါင်းဆောင်များ (1 မီလီဂရမ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း) ဖြစ်ကြသည်။ အစားအစာများတွင်သံအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သတင်းရပ်ကွက်များနှင့်လောလောလတ်လတ်ဟင်းလျာများကိုပြင်ဆင်ယုတ်ညံ့ခြင်းမရှိလမ်းအတွက် - ဒြပ်စင်အပူကုသမှုနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေစဉ်အတွင်း၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စွမ်းရည်, ဒါကြောင့်စည်သွတ်ငါးများခြေရာကောက်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, အာဟာရ, ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်၌ပါရှိသောအပေါင်းအဆီထဲမှာအမျှင်ဓာတ်နဲ့အနိမ့်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုစားပွဲပေါ်ရှငျဘုရငျတို့ဆိုသို့သူတို့ကိုငါလှည့် သက်သတ်လွတ် နှင့်အသားစိမ်း foodists ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပူအစားအစာများနှင့်အအေးမုန်, အချိုပွဲများနှင့်အချိုရည်ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့က, Pickled နှင့်စည်သွပ်ဗူး salting နိုင်ပါသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သီးနှံများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်ခုမှာ - ကုန်ကြမ်းစားနိုင်စွမ်း။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏မအဓိကအင်္ဂါရပ်ပေမယ့်သံများမဆိုကုသမှုထုတ်ကုန်မှာ, တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ပမာဏကိုထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအော်ဂဲနစ်သတ္တုသံပစ္စုပ္ပန် artichoke 3.5 မီလီဂရမ်၏ 100 ဂရမ်။ 1.7 မီလီဂရမ်များအတွက် 2.5 မီလီဂရမ်နှင့်ကြက်သွန်ဖြူရရှိသောတွေ့ရပုံ "ကြေးဝါ" - "သံ" ကိုအောက်ခံအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကညွတ်မှဒုတိယနေရာ။ 0.8 မီလီဂရမ်အောက်ကဟင်းသီးဟင်းရွက်ရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထားလမျးဆုရရှိသူ၏ကျန်။
ဥယျာဉ်ခြံမျက်စိဖို့ပန်းပွင့်ကာလ၏ဂုဏ်အသရေနှစျနဲ့သဲလွန်စ element တွေပေါကြွယ်ဝတဲ့အရသာရှိတဲ့အသီး, ပေးပါ။ သံကြွယ်ဝထုတ်ကုန်များမှာ - ကျနော်တို့အသီးကြောင့်ဟုမဆိုနိုင်ပါ။ စိတ်အားထက်သန်မှုအသီးများနှင့် 1 မီလီဂရမ် - - ရက်စွဲများ 2.5 မီလီဂရမ်၎င်း၏အများဆုံးအကြောင်းအရာများ persimmon, ပန်းသီးနှင့်သစ်တော်သီး, 1.6 မီလီဂရမ်ပိုင်။ "သံကြွယ်ဝသောအရာကိုအစားအစာများအတွက်?" ကိုမကြာခဏမေးခွန်း, အဖြေ "ပန်းသီး" ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်မူနေ့စဉ်စံ၏ 100% ရရှိရန်အလို့ငှာတစ်နေ့လျှင် 40 မှ 70 အသီးကိုစားရန်ရှိသည်မယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အသီး၏တန်ဖိုးသံပိုကောင်းတဲ့စုပ်ယူနိုင်ရန်အထောက်အကူပြုသောဗီတာမင် C နဲ့ B က 12 ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစိမျးလနျးအပင်၏အထက်ပိုင်းချက်ပြုတ်နှင့်ပါရှိသောမြို့သားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံကြောင့်တစ်ဦး condiments, အဖြစ်အသုံးပြုဟင်းသီးဟင်းရွက်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သဘာဝတရားအစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သီးနှံများကိုအော်ဂဲနစ်သံနှင့်အတူသဟဇာတပေါင်းစပ်ပေး၏ ဗီတာမင် C က၎င်း၏ပိုကောင်းစုပ်ယူနိုင်ရန်နှင့်ဖောလစ်အက်ဆစ်။ သို့သော်နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအစိမ်းရောင်၏တစ်ဖွဲ့လုံးအပှေ့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက် 43 မီလီဂရမ်;
ဟင်းနုနွယ်ရွက် 13.5 မီလီဂရမ် (က oxalic acid ကိုပါရှိသောကြောင့်အလက်တွေ့ကျကျစုပ်ယူမဟုတ်);
parsley, ဇီယာစေ့,6မီလီဂရမ်မှ Peppermint;
ပင်စိမ်း3မီလီဂရမ်;
နံနံခြင်းနှင့်ဆလရီ2မီလီဂရမ်;
chives 1 မီလီဂရမ်;
သုပ် 0.5 မီလီဂရမ်။
hard shell ကိုနှင့်စားသုံးဆီ kernel ကို - ကြောင်းချက်ပြုတ်အတွက်ခွံမာသီးဖြစ်ပါတယ်။ shell ကိုအောက်မှာကျန်းမာရေးနှင့်အသက်ရှည်၏မြင်ကွင်းကို၏အချက်အနေဖြင့်အသုံးဝင်သောတ္ထုများ, အော်ဂဲနစ်သဲလွန်စဒြပ်စင်များနှင့်ဗီတာမင်တွေအများကြီးဖွက်ထားပေးသည်။ သေချာပေါက်သွေးအားနည်းရောဂါအဘို့အသံကြွယ်ဝအခွံမာသီး, ပြင်းထန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဖိစီး, တစ်ဦးတင်းကြပ်တဲ့အစားအစာသို့မဟုတ်အသွေးတော်၏ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုအစားအသောက်များတွင်တွင်ထည့်သွင်းခြင်းကို:
"ခိုင်မာတဲ့အခွံမာသီး" နှင့် "သံ" ထုတ်ကုန်အကြား superlider - စိမ်းဝါနုရောင် 60 မီလီဂရမ်;
ထင်းရှူးခွံမာသီး (သိပ္ပံနည်းကျအသိထဲမှာပိတ်သောကျောက်ထင်းရှူးအမျိုးအနွယ်ကို) 5.5 mg ကို;
မြေပဲ (ရုက္ခဗေဒ၏ရှုထောင့်ကနေ legume မှပြောပြတယ်)5မီလီဂရမ်;
ပျားရည်နှင့်သီဟိုဠ်4မီလီဂရမ်;
hazelnuts3မီလီဂရမ်;
walnut2မီလီဂရမ်။
Kostroma, ဒတျချြ, Poshehonsky, Roquefort ဒိန်ခဲ, (100 ဂရမ်ထုတ်ကုန်နှုန်း) cheddar 1 မီလီဂရမ်;
ဆွစ်ဇာလန်ဒိန်ခဲနှင့် 0.8 မီလီဂရမ်;
mozzarella နှင့် Roquefort 0.5 မီလီဂရမ်။
ထို့အပြင်အာဟာရထုတ်ကုန်နို့ရည်ကနေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါဟာလူသားမြားသညျအတှကျကောငျးသော, ကယ်လစီယမ်နဲ့မဂ္ဂနီဆီယမ်တွေအများကြီးပါဝင်သော်လည်းသံများ၏စုပ်ယူမှုကိုတားဆီးခြင်း။ ထို့ကြောင့် microelement လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြီးသားသေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏသို့သော်တစ်သံအရင်းအမြစ်အဖြစ်ဒိန်ခဲသုံးစွဲဖို့အသိလုပ်မထားဘူး, ရိပ်မိပါဘူး။
အလွန်အကျွံအရေအတွက်ထဲမှာအလုပ်လုပ်သံပါဝင်သောကုန်ပစ္စည်းများ - အော်ဂဲနစ်သတ္တု "overdose" ၏အကြောင်းတရားများတစ်ခုမှာ။ အဆိုပါအကျိုးဆက်ဟာအလွန်အန္တရာယ်များပြီးလေးနက်ရောဂါဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သံပမာဏကိုထိန်းညှိဖို့ရိုးရှင်းတဲ့, မူးယစ်ဆေး-အခမဲ့နှင့်လုံးဝထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခု - အသှေးကိုပမာဏကိုလျှော့ချပစ္စည်းသုံးစွဲဖို့:
ဆားနဲ့တစ်ဦးလက်တစ်အက်ဆစ်ကြွယ်ဝ, detoxifying မပါဘဲကိုပြင်ဆင်စိမ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။
ပြုတ်ဆန်, ကစီဓါတ်များစွာ mucilage ဖယ်ရှားပစ်ရန် Pre-စိမ်နှင့်စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သော၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖျော်ဖြေ။
မုန့်နှင့်ခေါက်ဆွဲ, အူ undigested ပိုလျှံသံမှတဆင့် output ကိုသောဖိုင်ဘာပမာဏ, ဖွဲ့စည်း။
ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏနှင့်အတူ fats ဗီတာမင်အီး၏ ။
တံစဉ်များကို - ကိုခန္ဓာကိုယ်မှအကျိုးရှိခြင်းနှင့်အန္တရာယ်
ဆိတ်နို့ - ထိုကိုယ်ခန္ဓာအဘို့အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ contraindications
အဘယျသို့အစားအစာများဗီတာမင် D ကိုမဆံ့?
အစာရှောင်ခြင်း run ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Mead - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
Tofu - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
Lipoic အက်ဆစ် - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
ဂျုံပိုး - အကျိုးခံစားခွင့်
ဂီနီငှက်ကြက်ဥ - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအချိုရည် - အန္တရာယ်သို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်?
Ageratum - စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
Thoracic chondrosis - လက္ခဏာများ
တစ်ဦး bedspread ချုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါကိုထိပုတ်ပါအမြစ်စနစ် fibrous ထံမှကွဲပြားခြားနားပါသလဲ
မီးခိုးရောင်ဘွတ်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ဧပြီလမိုးကြိုးမုန်တိုင်း - ရိုးရာနိမိတ်
အခန်းကဏ္ဍများအတွက် Cara Delevingne postriglas nalyso
Rumer Willis photoshop ၏အသုံးပြုမှုကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေနေပါသည်!